Siday Cooke miniS4 / i Lenses caawisay Abaalmarin guuleysata DP Capture Nature's Beauty | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Sidee Curke miniS4 / i Lenses U Caawiyay Abaal Marinta DP Capture Nature's Beauty
Sidee Curke miniS4 / i Lenses U Caawiyay Abaal Marinta DP Capture Nature's Beauty
Abaalmarinta guuleystaha DOP / Filimka dukumiintiga, Mark MacEwen
Dabeecadu dhinacyo badan ayey ku leedahay. Mid ka mid ah astaamaha lagu raaxeysto ayaa ah kan duurjoogta ah ee bixiya noocyo kala duwan. Qaadashada quruxda caynkaas ahi waxay u baahan tahay wax ka badan kamarad fudud kaliya marka muraayadaha waxtarka leh ay ka mid yihiin Cooke miniS4 / i lensiska samayn kartaa dhammaan faraqa badan. Mark MacEwen waa nin haysta abaalmarin badan oo Abaalmarinimo DOP / Documentary ah. Mark wuxuu inta badan ka soo shaqeeyey taariikhda dabiiciga ah, barnaamijyada kasbashada iyo barnaamijyada dokumentiga sayniska. Beryahan dambe, Mark wuxuu safray kumanaan mayl ah oo leh go'an Cooke miniS4 / i lensiska, kaas oo uu u adeegsan jiray toogashada taxanaha la soo xulay ee lagu muujiyey gudaha Toddoba Adduunyo, Hal Planet.
Diiradda Toddobada Dunid, Hal Planet
Toddoba Adduunyo, Hal Planet waa BBC taxanaha ugu dambeeyay ee taxanaha duurjoogta. Taxanahan duurjoogta ah wuxuu ka bilaabmay UK bishii Oktoobar 2019. Barnaamijkan wuxuu diirada saarayaa booqashada dhamaan toddobada qaaradood iyadoo loo adeegsanayo diiwaangelinta duurjoogta kala duwan ee laga helo mid kasta. Markii laga hadlayo waxyaabaha muhiimka ah ee duubista duurjoogta Mark MacEwen wuxuu yidhi: “Nooca filimaanta duurjoogta ah ee aadka u sareeya waa iskudhafan iskaashi iyo himilo shaqsiyadeed.” “Maaddaama aan duubno xayawaan, badanaa dadka tirada yar ayaa sifiican u soo bandhigaya; Fursadda lagu qabsan karo dhaqanku waxay u dhacdaa si shaqsi ahaaneed waxayna hoos ugu dhacdaa isha isha DP. Qaybta iskaashigu badanaa waxay ku jirtaa qorshaynta iyo wada hadalada sheekooyinka socda. Waxyaabaha ayaa horumar sameeya oo isbeddelaya waqtiga oo dhan dabeecadda iyo badiyaa sheekada aad u dejiso filimka in la beddelo, ama waxaad hesho wax ka fiican ama ka duwan. Taasina waa marka qaybta iskaashigu runtii qaabilayso waana qayb ka mid ah geedi socodka aan runtii ku raaxeysto. Fikradaha isku-duubista iyo dhisida sheekada ayaa ah halka hal abuurka badan uu ka dhaco. ”
Sidee Mark MacEwen u Isticmaalaa Laydhka Cooke si Loogu Qabto Duurjoogta
Markuu ku sugnaa meheradda in ka badan 20 sano, Mark MacEwen wuxuu leeyahay khibrad ku filan filinka filinka duurjoogta, kaas oo lagu sii xoojiyay adeegsigiisa. Cooke miniS4 / i lensiska talaabooyinkiisa si uu u keeno 'Cooke Look' oo ah qaab yar oo fudud oo fudud.
Markii laga hadlayo aaggan gaarka ah, Mark ayaa yidhi Waxaan horay u isticmaali jiray muraayadaha 'Cooke lenses' mar walbana waan jeclaan jiray. Muuqaalka muraayadaha 'Cooke lenses' aniga ayey ila tahay, iyo sida ay u kala saaraan maaddada iyo asalka iyo nalka ayaa ah sida aan adduunka u arko. Waxa kale oo aan jeclahay sida ay uga shaqeeyaan dareemayaasha dhijitaalka ah - aniga ahaan, waxay uun iga caawiyaan ka qaadista kamarado dhijitaalka ah waxayna ka caawinayaan inay u ekaato mid dabiici iyo mid dabiici ah, ” "MiniS4 / i's way fiicneyd maadaama cabirkooda iyo culeyskoodu saamaxey inaan u isticmaalo kaliya maahan shaqo, laakiin aan ula qabsado xayawaanka gimbal ee xayawaanka waa inaan ku hayaa barnaamijka 'MōVI Pro' saacado badan, adoo raacaya xayawaanku daqiiqada saxda ah ama dhaqanka xoogaa. Tayada dhismuhu sidoo kale waa la yaab waxayna si fiican ula shaqaysaa qalabka xallinta.
Mark ayaa sidoo kale xusay sida “Aniga ahaan 40mm iyo 50mm waxay ahaayeen muraayadaha indhaha aan sida ugu badan u isticmaalo,” iyo sida “Waxay i siiyaan muddo ku filan dhererka focal si aan u abuuro ka soocid asal ahaan isla markaana aan u kala goyn karo inta u dhaxeysa lenska dheer iyo mudada dheer. Sidoo kale, dhererka focal dheer ayaa aad ugu anfacaya filinka duurjoogta maadaama had iyo jeer ay dhibaatadu ugu dhowaanayso maaddooyinka. The Cooke miniS4 / i lensiska safarka safarka waxaa ka mid ahaa 18mm, 25mm, 40mm, 50mm, iyo dherer ahaan 135mm.
Xaaladaha iftiinka ayaa si aad ah u kala duwanaa markii ay soo saareysay filinka gorillas ee dhulka hoostiisa ah ee kongiyada Kongo si ay u toogtaan xargaha maroodiga ee Antarctica. In kasta oo ay jiraan xaddidaadahaas, Mark wuxuu la dhacay sida ay Cooke miniS4 / i lensiska shaqeeyay oo wuxuu sharaxay sida Isticmaalka culus ee iftiinka dambe waa soo noqnoqda. Kaymaha dhexdooda waxaa jira kala duwanaansho aad u badan iyo iftiin yar, ka dib hooska aad u adag ee leh qorraxda dhalaalaya - xitaa nidaamyada kamaradaha casriga ahi way la halgamayaan, markaa haddii muraayadaha indhaha ay ka caawin karaan kala-duwanaanta ama farshaxanka kaalmaynta xanaaqa, waxay keenaysaa dhammaan farqiga. ”
Amaan badan oo Mark ah ayaa diiradda saaray Muraayadaha 'Cooke miniS4 / i lenses' wada shaqeynta iyo sidoo kale Helium Cas. Kani wuxuu ahaa doorashada kamaradda ee taxanaha, kaas oo uu yidhi, Qiimaha qaab dhismeedka, xallinta iyo cabirka waxay ka dhigan yihiin inaan u isticmaali karno kamarad muraayad dhaadheer, waxaan ku dhejin karnaa gimbals yar-yar ama nidaamyada helikabtarka weyn sida GSS / Shotover / GSS. Sidoo kale waxaan awood u leenahay inaan isticmaalno pre-ጥቅል iyo wixii la mid ah, taasoo faa iido weyn u leh markii aan isku dayeynay inaan filim ka sameyno waxyaabo mar uun dhici kara.
Calaamadda Muuqaalka Gaarka ah On Toddoba Adduunyo, Hal Planet
Marka laga hadlayo sii wadista taxanaha taxanaha iyo shaqadiisa, Mark wuxuu xusay sida goob gaar ah oo taxanaha ka mid ah ay u saameysay isaga. "Waxaan duubay silsilado maroodiyaal ah oo u dagaallamaya barnaamijka 'Antarctica'. Waxaan doonayay inaan isku dayo oo aan ka dhigo taxanaha inay dareemaan una ekaadaan kuwa kale oo aan arki lahaa, laakiin waxay caqabad ku yihiin filimka - behemoth aad u weyn ilaa 18-ft. dheer iyo 8000lbs. Kumanaan kun oo ka mid ahi waxay yimaaddaan xilligii deyrarka, labana waxay u diyaar garoobayaan inay u dagaallamaan xuquuqdooda taranka, ” MacEwen wuu xasuustaa isagoo sii hadlaya sida "Waxaan u adeegsaday miniS4 / i on gimbal si aan isugu dayo oo aan uga dhex helo, ula qabsado dareenka dagaalka oo aan hal-abuurka u xakameeyo goobta muuqaalka. Laakiin ma ahan shaqo sahlan in lagu wareego daanyeerradan. Waxaan inta badan ku khasbanaaday inaan ka boodo sida xayawaan kale u dacweeyay, halka kuwo kalena ay kugu soo dacweeyeen inaad baxsatay. Waa mid ka mid ah meelaha ugu la yaabka badnaa ee aan waligey soo maray. ”
Caadi ahaan, shaqadan ballaaran ee lagu qabtay qabashada duurjoogta waxay lahaan kartaa qaybteeda caqabado. Si kastaba ha noqotee, Mark wuxuu caddeeyay sida aysan caqabadaha oo dhan u ahayn natiijada xayawaannada waaweyn markii uu yiri “Waxaa laygu soo dacweeyay libaaxyo, maroodiyaal, gorillayaal, iyo maroodiyayaal shaabadood oo dhan cagtooda ku magacaaba in yar, laakiin waxaa jira hal uun oo aniga dhan iga sarreeya: dhidid dhidid Way yar tahay laakiin waxaa laga helaa tirooyin aad u tiro badan waxayna soo jiidataa dhididka, sidaa darteed waa wax badan oo laga fursan karo. Waxay ku guuleysatay inay iga xanaajiso qaybo badan oo ka mid ah xirfadayda, waxayna ka dhigi kartaa xitaa qofka ugu qallafsan inuu wax walba tuuro oo uu cararo si uu u nasto. ” Ka baxsan flora iyo fauna, waa waqti aad u badan oo aan ku maalgashan lahayn iyo dabcan dalabaadka xad dhaafka ah ee aan ku dhejineyno xirmada, jawiga aan ugu tala galnay awgeed. Waan ku faraxsanahay inaan idhaahdo miniS4 / i waxay si hufan u soo bandhigtay xaalad kasta. ”
Faahfaahinta Cooke miniS4 / i
The Cooke miniS4 / i lensiska waxaa la siiyaa / i Tiknolojiyad gacan ka geysata ururinta xogta muraayadaha lenska ee wax soo saarka, VFX iyo kooxaha wax soo saarka ka dambeeya. Laydhka noocan ah waxaa sidoo kale loogu talagalay dhammaan farshaxanka sawirka dhaqdhaqaaqa xirfadeed ee PL iyo kamaradaha elektiroonigga ah Teknolojiyadda / i waxa lagu daray qaabeynta Cooke miniS4 / i lensiska waxay ka caawisaa siinta shineemiyada sawir qaadeyaasha iyo kaamirooyinka kamaradu sida Mark MacEwen macluumaad muhiim ah oo ku saabsan dejinta lenska, masaafada diiradda la saarayo, jibbaarada iyo qoto-dheeriga, masaafada sicirbararka, nambarka taleefanka, macluumaadka milkiilaha, nooca lenska, iyo dhererka focal labadaba cabbiraadda iyo cabbiraadda muuqaalka. Waxay sidoo kale awood u siinayaan xogta raad raac aan toos ahayn, ruxitaanka, iyo xogaha khaldan.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan lensiska Cooke miniS4 / i, ka dib fiiri www.cookeoptics.com/l/minis4.html.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Mark MacEwen iyo shaqadiisa DOP, ka dib fiiri www.markmacewen.co.uk/.
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie BBC Warbaahinta-Warbaahinta Warbaahinta-SocialMedia Cooke miniS4 / i lensiska FOR-A JADWALKA, Nidaamyada Variant, Graham Chapman Prmoted toEditor I / Teknoolaji Mark MacEwen Hal Planet Casaanka Helium Toddobo Adduun Waran & Fallaaro Nidaamyada kala duwan 2019-12-24
Previous: Shabakadda Shaybaarka / Injineerka Nidaamka
Next: VFX Legion Iyo Madam Xilliyadiisii ​​Ugu Dambeysay